सम्झनामा मात्र अब -शारदा ! अलबिदा शारदा ! - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७५ मंसिर १८ गते २:१३ मा प्रकाशित
आयो टप्प टिप्यो लग्यो मितिपुग्यो टारेर टर्दैन त्यो
ईन्द्रै झुकेर बिन्ति गरुन पदमा त्यो विन्ति मान्दैन त्यो !!
अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा आइतबार बिहान निधन भएकी ३३ बर्षिय स्व शारदा पोखरेल घिमिरेको अन्तिम श्रद्धान्जली गरिएको छ । माटोले बनेको शरीर पुन: माटो मै परिणत भएको छ । हामी सबैलाई सदाको लागि कहिले नआउने गरि गएकी छिन् । अन्तिम श्रद्धान्जली मेरिल्याण्ड राज्यको ग्लेन बर्नी स्थित सिंगलटन फ्युनेरल एण्ड क्रिमेसन सर्विसमा गरियो ।
यस युगमा कसैकी छोरी ,कसैकी पत्नी ,कसैकी आमा ,कसैकी बहिनि र कसैकी दिदि बन्ने सौभाग्य पाएकी स्व शारदा पोखरेल घिमिरे सधैको लागि चीर निन्द्रामा गएकी छिन् । अब हाम्रो सम्झनामा मात्र रहने छिन् । आज डिसेम्बर ३ का दिन अन्तिम संस्कारमा उनलाई श्रद्धान्जली अर्पण गर्न आउने आफ्ना परिवार सदस्य ,आफन्त ,समुदाय ,शुभेच्छुक, शुभचिन्तकका नयन रसाउनुको साथै भाबुक हुदै गरेको दृश्य निकै मर्मस्पर्शी रह्यो ।
उनलाई हिन्दु धर्म अनुसार उनको पार्थिव शरीरको अन्त्येष्टि गरिएको छ । आइतबार बिहान निधन भएकी स्व शारदाको अन्त्येष्टि सोमबार बिहान १० बजे देखि राखिएको थियो । बिदाको दिन नपरेता पनि सक्ने सबैले उपस्थिति जनाएका थिए । स्व शारदा पोखरेल घिमिरे कि पति मेरिल्याण्ड क्षेत्रमा १० बर्ष भन्दा ज्यादा समय देखि बस्दै आउनु भएका समाजसेवी हरीनाथ घिमिरे हुन । स्व शारदाले पति तथा केवल अढाई बर्षकि आफ्नी प्राण भन्दा प्यारी छोरीलाई छोडेर गएकी छिन् ।
स्व शारदा पोखरेल घिमिरेका नजिकका परिवार तथा साथीभाईका अनुसार ४-५ बर्ष देखि स्व शारदा अबुर्द (क्यान्सर) रोग संग संघर्ष गरि रहेकि थिइन् भन्ने बुझिएको छ । नेपाल तनहु घर भएका स्व शारदाका श्रीमान हरि घिमिरे भोलि डिसेम्बर ४ तारिख नेपाल जाने उड्ने भएका छन् । उतै नेपाल घरमा नै सम्पूर्ण काम गरिने भएको नजदिकका साथीभाई/नातेदार द्वारा बुझिएको छ ।
अन्तिम श्रद्धान्जलीमा स्व शारदाका मातापिता ,दिदि ,बहिनि तथा दाजुभाईको उपस्थिति रहेको थियो । मेरिल्याण्डका सम्पूर्ण समुदायका तर्फबाट सामाजिक अगुवाहरुका तर्फबाट महाबाणिज्यदुत प्रेम राजा महत ,गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति अमेरिकाका उपाध्यक्ष जेदु पोखरेल ,नासो कम्युनिटीका अध्यक्ष गोपाल बिश्वकर्मा तथा अमेरिका नेपाल सोसाइटीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा बिष्णु घिमिरेले स्व शारदा पोखरेल घिमिरेलाई श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना दिएका थिए ।
गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका उपाध्यक्ष जेदु पोखरेलले स्व शारदा प्रति समबेदना दिने क्रममा हामी दुखि छौ ,वहा अहिले हामीसंग हुनु हुन्न तर जहा हुनु हुन्छ ईश्वरको साथ हुनु हुन्छ भनेका थिए । समुदायले भाबपूर्ण रुपमा स्व शारदा पोखरेल घिमिरेलाई पुष्प गुच्छा अर्पण गरेका थिए ।